ကဏ္ဍစုံ ပြခန်း: မမှားသော ရှေ.နေ - မသေသော ဆေးသမား
မမှားသော ရှေ.နေ - မသေသော ဆေးသမား
ZOLZOL | 1:55 PM | သိမှတ်ဖွယ်ရာ
ZOLZOL | 1:55 PM |
မမှားသော ရှေ.နေ - မသေသော ဆေးသမား” ဤလောကသားများအလယ်မှာမရှိသလောက်ကို ရှားလှ
မယ်ထင်ပါတယ် ။ လူ.အသိုင်းအဝန်းမှာကြည့််ပါက လည်း “အမှား” ကင်းသူဟူ၍ ရှာမတွေ.နိုင်ပါ။
အရေးကြီးသည်က “မိမိအမှားကို အမြန်သိပြီး အမှန်ရောက်တဲ့အထိ ပြင်ကြည့်ကြ” ဖို.လိုပါတယ် ။ “မှားမှန်း
သိလျက် ပြင်ရန်ခက် “ နေပါကလည်း ဘဝအတွက် ရတက် မအေး စရာ ဖြစ်လာတော့မှာအမှန်ပါ ။
ဒီလို မိမိအမှားကို “အမှား” ရယ်လို. မိမိကိုယ်တိုင် သိနိုင်ဖို.ဆိုတာကလည်း အင်မတန်.ကို မလွယ်တဲ့ကိစ္စပါ။
လူအများစုအနေနဲ.က ကိုယ်လုပ်တာသာ”အမှန်” ပါလို.တယူသန်နေ တတ်ကြတာမဟုတ်ပါလား ။ ဒါ့ကြောင့်
“အမှားကို အမှား“ပါလို. မိမိအကျိုးကိုသာ လိုလိုလားလားနဲ. ပြောဆိုညွှန်ပြ ဆုံး မပေးနိုင်တဲ့ “ဆရာကောင်း-
မိတ်ဆွေကောင်း” ဆိုတာလည်း အရေးတကြီးကို လိုအပ်လှပါတယ်။
နေရာတကာ”မှန်ပါ့-ဟုတ်ပါ့“ လုပ်ပြ-ပြောဆိုပြီး ညာစား ဝါစား နေကြတဲ့ ကပ်ဖါး- ကပ်စားတွေက လည်း ဒီ
လောကထဲ နည်းမှ မနည်းတာကလား ။
သက်ကြီးစကား တစ်ဆင့်ကြားထားတဲ့ “မြှောက်တိုင်းလည်း မမြောက်နဲ“ ဆိုစကားကလည်းမှတ်သား လောက်
ပါပေ တယ်။ရာထောင်များစွာသောကျောင်းသားတွေထဲမှာအတော်ဆုံး အထူးချွန်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့ “အဟိံသက”
ဆိုတဲ့ကျောင်းသားကို နာမည်ကျော် ” ဒိသာပါမောက္ခဆရာကြီး” က-“ ငါ့တပည့်က လူရည်ချွန်ကြီးဆိုတော့ အ
တတ်ပညာပန်းတိုင်ရောက်အောင်ချီးမြှောက်ရမယ်-ဒါ့ကြောင့် လက်တွေ.ပညာအနေနဲ.” လူပေါင်းတစ်ထောင်
ပြည့်အောင် သတ်ရမယ်“ တဲ့။
“အဟိံသက” ကလည်း ပထမ ငြင်းပေမဲ့ သူ.ကိုမြှောက်ပင့်နေတဲ့ဆရာကြီးကို မလွန်ဆန်နိုင်တဲ့အဆုံး “လူ သတ်
သမားကြီး” လုံးလုံးဖြစ်သွားခဲ့ရပါသတဲ့ ။ သူကတော့ “အင်္ဂုလိမာလ” ပါပဲ ။
နာမည်ကျော် တက္ကသိုလ်ကျောင်းက ဒိသာပါမာက္ခဆရာကြီး ကလည်း “အဟိံသက”ရဲ့ ပညာ ထူးချွန်မှုကို မနာ
လိုဖြစ်နေကြတဲ့ ကျောင်းသားများရဲ့ ဂုံးစကားကို နှသုံးသားမှာ အမှတ်မှားလို. “အဟိံသက” ရဲ့ဘဝအား ပညာဓါး
မကြာခဏ ဆိုလာကြတဲ့ကျောင်းသားများရဲ့စကားကို အဟုတ်ကိုအယုံမှားတဲ့ ဆရာကြီးဟာလည်း“မကောင်းတဲ့
အဲဒီနောက်လူတော်လူကောင်းလေး “အဟိံသက” တစ်ယောက် တောကြီးထဲ ရောက်သွားပါတယ်။ လူတွေသတ်ပြီး
မှတ် လို.မရတော့ လက်ညှိုးတွေဖြတ်-ကြိုးနဲ.သီပြီးမှတ်ပါသတဲ့။ “အင်္ဂုလိမာလ” ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ကလည်း “လူသေ
တွေရဲ့ လက်ညှိုးကို ပန်းကုံး လိုသီ လည်မှာဆွဲတဲ့ လူမိုက်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ.လူဆိုးလူမိုက်ကြီးဖြစ်သွားတဲ့ “အင်္ဂုလိမာလ”အဖြစ် ဘုရင်ကအစ အကြောက်ရအလန်.ရဆုံး လူသတ်သမား
သူရှိနေတဲ့တောကြီးကိုလည်း ဘယ်သူမှဖြတ်မသွားရဲ မလာရဲကြတာ့ဘူးပေါ့။ လူတစ်ထောင်ပြည့်ဖို.တစ်ယောက်သာ
လိုတဲ့အချိန်မှာ သူ.ရဲ့မိခင်ဖြစ်သူကလည်းသားရဲ့သတင်း ကိုကြားပြီးသားကိုခေါ်ဖို.တောထဲကိုလိုက်သွားပါတယ်။
ဒီအချိန်မှာ ဗုဒ္ဓမြတ်ဘုရားကလည်း ကျွတ်ထိုက်သူကို ချွတ်ဖို.ဥဏ်တော်နဲ. အကြည့်---လူ.အသိမရှိတော့တဲ့ “အင်္ဂုလိ
မာလ” ဟာ “အမေ” ကိုမြင်လို.တောင် သတိရှိမှာမဟုတ်ပဲ သတ်မိ် တော့မှာကိုလည်းမြင်ရော တန်ခိုးတော်နဲ.“အင်္ဂုလိ
“အင်္ဂုလိမာလ”လည်း ဘုရားကိုမြင်တာနဲ.အတင်း ပြေးလိုက် တော့တာပေါ့ ။ ဖြေးဖြေးချင်း ကြွ လှမ်းတော်မူနေတဲ့
မြတ်ဘုရားကို အစွမ်းကုန် အပြေး လိုက်နေတဲ့ “အင်္ဂုလိမာလ” က မမှီနိုင်ပါ ။ တကယ်တော့ မြတ်ဗုဒ္ဓက ခန္တီမေတ္တာ
ဓာတ်နဲ. တန်ခိုးတော်ကိုလည်းသုံးခဲ့ပါတယ်။“အင်္ဂုလိမာလ” သွားနေတဲ့ မြေကြီးကို လှိုင်းထ အောင်ဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့
အပြင် မြေပြင်ကို ခေါက်လိပ်ဖြစ်စေပြီး“အင်္ဂုလိမာလ” ဖက်မှာအတွန်. အလိပ်တွေဖြစ်စေပါတယ် ။ ဒါကြောင့် “အင်္ဂု
လိမာလ" လည်း ပင်ပန်းဆင်းရဲကြီးစွာနဲ.ပြေးလိုက်နေရရှာပြီဖြစ်ပါတယ် ။ သူ.ခမြာဘယ်လောက်ပြေး လိုက်လိုက်
မြတ်ဘုရားကို အမှီမလိုက်နိုင်ပါ။ အတော်ကြာတဲ့အခါ အင်္ဂုလိမာလ”က မောလွန်းလို.မလိုက်နိုင်တော့ပဲ ”အို-ရဟန်း
ကြီးရပ်ပါတော့ - ရပ်ပါတော့” လို.ဆိုလာပါတယ် ။
“ချစ်သား“ အင်္ဂုလိမာလ”ငါဘုရားက ရပ်နေပြီးဖြစ်ပါတယ်-ရပ်ရမှာက သင်ချစ်သားပါ” လို.မိန်. ကြားလိုက်ပါတယ်။
ဒါကိုနားမလည်လို.“အင်္ဂုလိမာလ”ကပြန်မေးလိုက်တဲ့အခါ “ချစ်သား အင်္ဂုလိမာလ” ငါဘုရားရပ်နေတာက ဘဝသံ
သရာလမ်းဆုံး အရဟတ္တမဂ် အရဟတ္တဖိုလ်ကိုရပြီး ခန္တီမေတ္တာ ဂရုဏာစတဲ့ သူတော်ကောင်းတရား အပေါ်ရပ်တည်
နေပြီးဖြစ်လို. ဘဝသံသရာမှာပြေးဖို.မလိုတော့ဘူး-ဒီဘဝနောက် ဆုံးပဲ-ဒါကြောင့် ငါဘုရားရပ်နေတယ်လို.ပြောတာ။
သင်ကတော့ မပြေးနိုင်လောက်အောင် ဖတ်ဖတ်မောနေလို. ရပ်နေပေမဲ့သတ္တဝါများအပေါ် စောင့်စည်း ထိန်းချုပ်မှုမ
ထားပဲ လူတစ်ထောင်ကို မိုက်မိုက်ကန်းကန်း အရမ်းသတ်ခဲ့တယ် ။ ခန္တီ မေတ္တာ ဂရုဏာစတဲ့သူတော် ကောင်းတရား
အပေါ်ရပ်တည်နိုင်စွမ်းမရှိဘူး။ ဒီသင့်ရဲ့ မကောင်းမှုတွေကြောင့် ဘဝသံသရာမှာရော- အပါယ် ၄-ဘုံမှာရော ဆင်းရဲ
ပူလောင်စွာနဲ. မဆုံးနိုင်အောင် ပြေးသွားနေ ရဦးမှာ-သင်လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွက ပြေးရမယ့်အလုပ်တွေ ဖြစ်တယ်။
အကု သိုလ်ဆိုတာ ကြွေးယူ တာပဲ- မဆုံးနိုင်အောင် အတိုးနဲ.ဆပ်ရမှာပဲ။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ကိုအပါယ် သံသရာမှာ ပြေး
ကြောင်းမကောင်းတဲ့ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ် သတ်ဖြတ်မတဲ့ အလုပ်ကို ခုချက်ခြင်းရပ်လိုက်ပါ ဆိုတဲ့အနေနဲ. ရပ်ခိုင်း
တာ” ဒီလို မြတ်ဘုရားရဲ့တရားစကားကို နာကြားလိုက်ရတယ်ဆိုတာနဲ. အခြေခံပညာကောင်းတဲ့ “အင်္ဂုလိမာလ”
ဟာအသိတရားချက်ခြင်းရသွားပါတာ့တယ် ။ ဒါ့ကြောင့်သာပဲ ဘုရားထံမှာ အမှားကိုဝန်ခံပြီး ရဟန်းအပြီး ဝတ်သွား
လောကမှာ အမှားကိုအမှန်ထင်နေရင် အင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်။ တက်လမ်းလည်း ပိတ်သွားးပြီဖြစ်
ပါတယ် ။ အမှားကိုမှားမှန်းသိတာနဲ. တစ်ပြိုင်နက် ချက်ချင်း ပြင်လိုက်ပါ ။ အမှားကို အမှန်ပြင်တာ ဘယ်အခါမှ
နောက်ကျတယ်လို.မရှိ- အသိ တရားနဲ.အပေါင်းအသင်းကိုလည်း သတိထားရွေးတတ်ဖို.လိုပါတယ် ။
”ဘယ်သူမှ အတိတ်ကို ပြန်သွားပြီး ဆိုးရွားတဲ့အစကို ပြင်လို့မရပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အောင်မြင်တဲ့ အဆုံး သတ်ရဖို့
အခုချက်ချင်းစတင် လှုပ်ရှားတာကိုတော့ လူတိုင်းလုပ် လို့ ရပါတယ်” လို.ပညာရှင်များက ဆိုထားကြပါတယ် ။
လောကအကျိုး တို့သယ်ပိုး Help Lovers
Posted by ZOLZOL at 1:55 PM